कहाँ पुग्यो एमाले-माओवादीको पार्टी एकता ? – Nepal24News
कहाँ पुग्यो एमाले-माओवादीको पार्टी एकता ?
December 28, 2017 by नेपाल २४न्युज
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले गति लिने भएको छ ।
केही दिन यता राजधानीबाहिर रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार राजधानी फर्किएसँगै पार्टी एकता प्रक्रियाले पनि गति लिने भएको हो । प्रचण्डको अनुपस्थितिमा पार्टी संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।
पार्टी संयोजन समितिको बैठक बसेर एकता प्रक्रियालाई औपचारिक दिन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु गृहकार्यमा जुटेका छन् । नेतृत्व, विधि र सिद्दान्त, कमिटी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा दुबै दलले मिलनबिन्दु खोज्दैछन् ।
निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेर प्रत्यक्षतर्फ ६०–४० प्रतिशत सिट भागबण्डाका साथ निर्वाचनमा होमिएका वाम गठबन्धनका नेताहरू अहिले आएर अल्मलिएको आरोप कार्यकर्ताहरूले लगाएका छन्। पार्टी एक हुनुपर्छ भन्नेमा दुबै पार्टीको कार्यकर्तास्तरमै दबाब देखिएको छ ।
बाहिर सतहमा सरकार र पार्टीको नेतृत्वको विषय देखिए पनि मुख्य कुरा विधि र सिद्दान्त रहेको नेकपा एमालेका एक नेताले दैनिक नेपाललाई बताए । उनका अनुसार सरकार गठन गर्नु बाध्यात्मक अबस्था रहेकाले तत्कालै सरकार गठन गर्ने र पार्टी एकता प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजानेमा नेताहरु सहमत देखिएका छन् ।
एमाले स्थायी समिति बैठकले पार्टी एकता र सरकार गठन सँगसँगै लैजाने निर्णय गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले पहिले एकताको टुंगो लगाएर सरकार गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एकतामा समस्या छैन्: नेताहरु
दुई दलका नेताहरू भने एकतामा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल एकताको विषयमा कुनै विवाद नभएको भन्दै चाँडै हुने बताउँछिन् ।
एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ दुई दलबीच छलफलसँगै सहजै एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने र चाँडै टुंगिने दाबी गर्छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा भने अलमल देखिएको छ । एमालेले बहुमतीय आधारमा हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्रले राजनीतिक तहमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै काँग्रेस र एमालेको बीचको बाटो रोजेकोको छ ।
Posted in मुख्य समाचार, राजनीतिक
Prevयस्तो छ जस्तो सुकै घमण्डी केटीलाई पनि सजिलै पट्याउने सुत्रहरु.– जानी राखौ
Nextयार्सागुम्बा किन सुन भन्दा महंगो र महत्वपूर्ण ? यस्तो छ यसको चमत्कारीक फाईदाहरु